Indlu yaseBenezette-iNdlu iphela kanye eDolophini!
Hlala eBenezette kwaye ubone i-elk. Ifakwe kanye edolophini, eli khaya linomtsalane le-1500 sq ft 1880s libonelela ngamagumbi okulala ama-4, amagumbi okuhlambela ayi-2 kunye nekhitshi eligcweleyo kunye negumbi lokutyela.
Thatha imayile enye ujikeleze idolophu ukutyelela iivenkile zasekhaya kwaye ugcine amehlo akho ejonge ezo elk!
Nokuba uhlala ukuzingela kunye nokuloba okanye ukuthatha ithuba lemisebenzi yangaphandle emangalisayo, iBenezette House ikulungele ukuhlalisa.
I-Th yi-1500 sq ft yekhaya ineempawu ze-4 zokulala. Ikhaya libekwe kanye edolophini, ecaleni kwendlela 555, kumgama wokuhamba ukuya kumashishini edolophu kunye nepaki. I-Elk inokubonwa izulazula eyadini nangaliphi na ixesha. Qiniseka ukuba uze nekhamera yakho!
I-Benezette House ayisiyoyamaqela amakhulu kuphela. Siyavuya ukwamkela izibini ezijonge uhambo lwempelaveki ukuya e-Elk Country.
Umgangatho wokuqala obanzi unamagumbi amabini okuhlala amakhulu, ikhitshi, igumbi lokutyela, igumbi lelanga kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo.
Umgangatho wesibini unamagumbi okulala amane kunye negumbi lokuhlambela eli-1 eligcweleyo.
Indawo engaphandle inomgodi womlilo onezitulo ezigoqekileyo ezibekwe kwigumbi lokuhlala. Sikwanayo negrisi yokugcoba ngaphandle.
*Ukuba ucoca abantwana abangaphantsi kwesi-2, asikwazi ukulutshixa ucango oluya kumgangatho ongaphantsi, kodwa luyatshixa. Sisebenzela ukubonelela ngezitshixo zekhabhathi njengoko izixhobo zokucoca zifumaneka ngaphantsi kweesinki ekhitshini nakwiindawo zokuhlambela.
I-Benezette yindawo encinci, ekhuselekileyo.
Sinabamelwane abahlala macala onke. Siyakucela ukuba ube nembeko kubamelwane bethu.
Ndidla ngokungafumaneki ukudibana nawe buqu. Nangona kunjalo, ndinosapho olukhoyo. Nceda ufikelele nangaliphi na ixesha nge-app kwaye siyakwazi ukunceda nangayiphi na indlela esinokuyenza ngayo.